1. ယေရှုတစ်ပါးတည်းသာ သေခြင်းကို အောင်မြင်ခြင်း (ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း)
2. ယေရှုဘုရား၏ မွေးနေ့ (ခရစ်စမတ်နေ့) ကို ကမ္ဘာက ကျင်းပပေးရခြင်း
3. ခရစ်သက္ကရာဇ်က ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးခြင်း
4. ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယေရှုဘုရားကို ကိုးကွယ်သောလူ အများဆုံးဖြစ်လာခြင်း
5. ယေရှုဘုရား ဖွားမြင်တော်မူမည့်အကြောင်းကို ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ပရောဖက်များ ကြိုတင်ဟောကြားခြင်း
6. ယေရှုဘုရား ဖွားမြင်တော်မူရာ အရပ်ကို ကြယ်က အတိအကျ ညွှန်ပြခြင်း
7. ယေရှုဘုရား ဖွားမြင်တော်မူခြင်းကို ကောင်းကင်တမန်များက ကြေငြာပေးခြင်း
8. ယေရှုဘုရား ဖွားမြင်ပုံသည် လူ့ဓမ္မတာအရ မဟုတ်ပဲ ဆန်းကြယ်ခြင်း ... စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁။ ဘုရားတကာတို့၏ အထက်တွင် ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲဆန်းကျယ် အံ့သြဘွယ်ရာ အချက်အလက်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
၂။ ယေရှုသည် စစ်မှန်သောဘုရားဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ချက် (၄)ချက်
၃။ ဘုရားတကာတို့တွင် ယေရှုဘုရား တစ်ပါးတည်းကသာ စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်သော အချက် (၅)ချက်
၄။ ဘ၀သံသရာ လည်ခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်ချက် (၃)ချက်
၅။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် နိဗာန်ဘုံ၏ ခြားနားချက် (၆)ချက်
၆။ ယေရှုဘုရား၏ (၁၈)နှစ်ပြဿနာများ ဖြေရှင်းချက် (၅)ချက်
၇။ ကောင်းရာလုပ်လျှင် ကောင်းရာရောက်နိုင်ပါမည်လော
၈။ လူသည်ဘယ်ကစတင် ဖြစ်ပေါ်လာပါသနည်း
၉။ စင်္ကြာဝဌာ၏ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
၁၀။ ကျမ်းဂန်တကာတို့ထက် ခရစ်ယာန်ကျမ်းဂန်၏ တိကျမှန်ကန်၊ အံ့သြဘွယ်ရာများ
၁၁။ ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နတ်ဆိုး၊ ၀ိညာဉ်ဆိုး၊ စာတန်မာနတ် တို့၏ မူလစတင်လာပုံ
၁၂။ စစ်မှန်သော ဘုရားကို ရွေးချယ်နည်း
၁၃။ ယေရှုဘုရား၏ အံ့သြဘွယ်ခေါ်သံ
၁၄။ ဘုရား၊တရား၊ သံယာ၊ မိဘ၊ ဆရာ တန်းတူထား၍ ရပါသလော
Tel: +60 (0)16 280183
မလေးရှား၊ ခမ်းမြင့်စာအုပ်ဆိုင် (မြေညီထပ်) တအုပ် RM12.00
စင်ကာပူ၊ မေမြန်မာ (လေးထပ် #04-03, Peninsula Plaza) တအုပ် S$5.00
ဆရာဦးထန်ဇကပ် - စာအုပ်အညွှန်း
ဆရာအောင်နိုင်နှင့် အတူ မင်းအောင်သက်လွင်၊ ဇော်အောငာ်(မုံရွာ) တို့ မလေးရှား ဂျဟိုးမြန်မာမိတ်သဟာရတွင် Dec 2010, တနင်္ဂနွေတွင် မိတ်သဟာရအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ တရားလာဟောသော ဆရာဦးထန်ဇကပ် သူ့စာအုပ်များအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောသွားပါသည်။ ပြည်ပရောက် သင်းအုပ်ဆရာများစွာအနက် ခရစ်ယာန်စာပေကို အထူးထက်သန်သော ဓမ္မဆရာဖြစ်ပါသည်။ သူ၏စာအုပ်များတွင် မြန်မာပြည်မှ ထူးခြားချက် များစွာကို ရေးသား ထားသဖြင့် ဖတ်ရှုသူများအတွက် မြန်မာ့ခရစ်ယာန် အသိုင်းအ၀ိုင်း အကြောင်းကို ပြေးကြည့်ရန် အခွင့်မသာသူများအတွက် အကြမ်းသဘော နားလည်နိုင်ပါသည်။ ဆရာသည် မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်များ နိုးကြားမှု Revival အတွက် ခရစ်ယာန်စာပေ များများဖတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ခံယူထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဇနန္န၀ါရီ(၂)၊ ၁၉၅၄ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ခုနှစ်မှ ခရစ်တော်လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှ B.A (Bible) , M.Div (1984) ရရှိခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှ ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာရေးသားသော "သင်သေလျှင် ဘယ်သွားမည်နည်း" စာအုပ်ကြောင့် မြန်မာအစိုးရမှ လိုက်လံရှာဖွေရာ အိန္နိယသို့ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်အနှံ့ ဟောပြောခဲ့ပြီး လူသိများကြသည်။ (ကျွန်တော်ကတော့ ရိုးသားစွာပြောရလျှင် မသိပါခင်ဗျာ)။
(၁) ၀န်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့
(၂) ကယ်တင်ခြင်း ပြန်လည်ဆုံးရှုံးနိုင်မည်လော
(၃) အကျင့်နှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းအသေဖြစ်၏
(၄) သင်သေလျှင် ဘယ်သွားမည်နည်း
(၅) ငရဲသွားမည့်သူများနှင့် လွတ်ရာလမ်း
(၆) ၀ိညာဉ်တော် ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ
(၇) ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန်းကြယ်၊အံ့သြဘွယ်ရာများနှင့် လူ၊နတ်၊ စတြ၀ဌာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
(၈) ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရန် ခြေလှမ်း(၄)ဆင့် တို့ဖြစ်ပါသည်
ယခု လာရောင်းချသော စာအုပ် (ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရန် ခြေလှမ်း ၄ဆင့်) စာအုပ်ရလိုသော
တယ်လီဖုန်း ၀၁၆-၂၈၀ ၁၂၈၃
SCG-2-09, Bukit Sentosa, P.O Rawang, Malaysia
ပထမအကြိမ် အုပ်ရေ (၁၀၀၀) - Oct 2007
ဒုတိယအကြိမ် အုပ်ရေ (၁၀၀၀) - Jan 2008
တတိယအကြိမ် အုပ်ရေ (၅၀၀) - Aug 2008
စတုတ္တအကြိမ်း အုပ်ရေ (၅၀၀) - Oct 2009
ပဉ္စမအကြိမ် အုပ်ရေ (၂၀၀၀) - Jan 2009
ဆဌမအကြိမ် အုပ်ရေ (၁၀၀၀) - Oct 2009 (Malaysia)
စာအုပ်တန်ဖိုး တစ်ဆယ်တိတိ (Malaysia Riggit)
ခြေလှမ်း (၁)။ ဘုရားကိုအသိအမှတ်ပြု၊ လက်ခံသောအဆင့်
ခြေလှမ်း (၂)။ မိမိ၏ တဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်ကြောက် အတိအလင်းလက်ခံခြင်း အဆင့်
ခြေလှမ်း (၃)။ အကြွင်းမဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးတော်သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တဖြင့်ပြန်လာကြောင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း များပြုလုပ်ပြီး တပါးသူကိုဝေငှသောအဆင့်
ခြေလှမ်း (၄)။ သမ္မာလမ်းကို လျှောက်နိုင်ပြီး၊ လမ်းလွှဲမှုများကို သမ္မာတရားအားဖြင့် သိရှိကာ လမ်းမလွှဲပဲ သေသည့်တိုင် သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောာင်း အဆင့်
အဆင့် (၃)၊ (၄) သည် ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရန် ခြေလှမ်း ၄ဆင့်တွင် အများသောသူများသည် အဆင့်(၁)၊ (၂) ကို မကြေပဲ အဆင့်(၃) သို့ရောက်သွားကြသည်။ အထူးသဖြင့် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၃ပါးတစ်ဆူ ယုံကြည်ခြင်းမှ လွှဲမှားမသွားရန် လွဲမှားသောအယူ၊ ဆရာများအား သတိထားပြီး သမ္မာတရားဖြင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို လျှောက်လှမ်းရန် အားပေးထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဖတ်ကြည့်ရန်ကောင်းပါသည်။ သူသည် ခုန်ပေါက်ကခုန်ချီးမွမ်းသူများ၊ အော်ဟစ်တပါးစကားပြောသူများကို အပြစ်မတင်သော်လည်း ထိုအခြေအနေရောက်သူများကို ခြေလှမ်းအဆင့်(၃) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဆရာဦးထန်ဇကပ် နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဦးမည်။ ၂၀၁၀ တွင် မလေးရှားရောက်မြန်မာလူမျိုးစု ၆၀၀၀ကျော် ကုလအစီအစဉ်ဖြင့် တတိယနိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ ဂျပ်ဆန်အသင်းတော်မှလည်း အချို့ တတိယနိုင်ငံသို့ ပါသွားကြပါသည်။ ယေရှုဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန်းကြယ်၊အံ့သြဘွယ်ရာများနှင့် လူ၊နတ်၊ စတြ၀ဌာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ စာအုပ်ကို မလေးရှားတွင် ပုံနှိပ်ကာ ဖြန့်ချိနိုင်ရေးအတွက် ဆုတောင်း၊ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။